Thermomix को साथ चिकन ब्रोथ नुस्खा - बनाउन को लागी सजिलो र द्रुत नुस्खा | ThermoRecines
म धेरै पटक यो कुखुराको ब्रोथ बनाउँछु। "सूप" मध्ये एक हो बेलुकाको खाना मेरा साना बच्चाहरूको मनपर्ने र म अचम्म मान्दिन किनकि यो धेरै सान्त्वनादायी र स्वस्थ छ।
यो गर्न धेरै सरल छ र धेरैलाई समर्थन गर्दछ विविधताहरू हामीसँग घरमा भएका सामग्रीहरू अनुसार। यस अवस्थामा, हराउन नसक्ने एक कुखुरा हो। म सामान्यतया इबेरियन ह्याम र हरीको हड्डी जोड्दछु, जस्तै हरियो सिमी, गाजर, टमाटर, आदि।
यसको बारेमा अर्को राम्रो कुरा यो हो कि यो धेरै बहुमुखी छ र हामी यसलाई चावल वा अन्य तयारीको लागि आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। हामी पनि गर्न सक्छौं यसलाई स्थिर गर्नुहोस् अन्य स्टूमा प्रयोगको लागि खण्डित
Este घरेलु ब्रोथ यसले हामीलाई हजुरबा हजुरआमले के गर्‍यो, उनीहरूको सबै प्रेम र हेरचाहको साथ सम्झाउने छ।
1 कुखुराको झोल
आधारभूत नुस्खा यति पारंपरिक कि यो कहिले पनि शैली बाहिर जान्छ।
१ कुखुरा hindquarter
१ हेम हड्डी
१ लीक (सेतो भाग)
अजवाइन को १ छडी
१ मुट्ठी हरियो बीन्स (भागहरु मा काटिएको)
१ सानो टमाटर
१/२ चम्मच खाना रंग र हल्दी
हामी सबै सामग्रीहरू धुन्छौं र गाजर, अजवाइन र दुई वा तीन टुक्रा टुक्रा पार्दछौं।
हामीले तिनीहरूलाई शीशामा राख्यौं र बाँकी सामग्रीहरू थपेका छौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति।
हामी टोकरी मार्फत ब्रथलाई तान्छौं जुन यो स्प्याटुलासँग समात्छ।
हामी यो ब्रोथ प्रयोग गरी केहि नूडल्स बनाउन सक्छौं। हामी तरकारीहरू र कुखुराको टुक्राहरू सँगै सूप सेवा दिनेछौं।
यो ब्रोथ मासुबाट पनि बनाउन सकिन्छ pieces०० ग्राम पातलो मासुलाई टुक्रा-टुक्रा गरेर।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: CARNES, Celiac, सलाद र तरकारीहरू, सूप र क्रिम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » CARNES » कुखुराको झोल
मसँग टीएम २१ छ र यसको चम्चा गति छैन, म कुन गति सेट गर्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि यो कुखुराको ब्रोथ बनाउनको लागि।
भिक्टोरिया तपाईंले सब भन्दा कम राख्नु पर्छ जुन तपाईंको थर्मसमा छ जुन मैले गल्ती गरेन भने गति १ हो।
यो शोरबा अद्भुत छ, घरमा म यसलाई धेरै बनाउँछु। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ।
मँ थर्मोमिक्समा पकाएको नुस्खा भेट्न चाहन्छु जुन यसको लागि लायक छ, म तपाईलाई धेरै विश्वास गर्दछु, अभिवादन
ईवान्ड्यालाई जवाफ दिनुहोस्
इभा, चिसो आउन थालेको छ, म त्यो नुस्खा संग खुशी जनाउनेछौं र हामी यो तपाईंको लागि प्रकाशित गर्नेछौं।
नमस्ते ईवा, केहि दिनमा म केक रेसिपी प्रकाशित गर्ने आशा गर्दछु। अब हामी होलोभिनका लागि केहि चीजहरू तयार गर्दैछौं, तर पछि हामी स्ट्युको लागि पकाउने तरीका प्रकाशित गर्दछौं जुन एकदम राम्रो छ। शुभकामना।
नमस्कार, म धेरै नौसिखिएकी छु त्यसैले मसँग दुई एकदमै आधारभूत प्रश्नहरू छन्, तर हे .. १ 1300०० मिलीटर पानी के जब तपाईं तिनीहरूलाई थर्मामिक्समा तौल गर्नुहुन्छ, कति ग्राम होला? र दोस्रो, जब तपाईं केहि मिनेट को लागी केहि चाउचाउ पकाउन भन्नु हुन्छ, के तपाईंको मतलब उही ब्रोथमा वा अलग्गै? थर्मोमिक्सको साथ पनि?
एक हजार धन्यवाद र ब्लग को लागी धन्यवाद, यो महान छ !!
Agnès लाई जवाफ दिनुहोस्
एग्नेस, पानी जब थर्मामिक्समा तौल १ 1300०० ग्राम छ र तपाईं थर्मोमिक्समा केही नूडल्स पकाउन सक्नुहुन्छ कुनै श .्का बिना। के हुन्छ त्यो धेरै शोरबा बाहिर आउँदछ र म सामान्यतया मेरा दुई छोरीहरूका लागि चाउचाउहरूसहित तैयार गर्दछु, म यसलाई सामान्यतया सानो सास प्यानमा राख्छु र केही पकाउँछु, तर तपाईं सक्दो यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ।
मसँग यस जस्तो धनी कहिल्यै थिएन। सामान्यतया, मसँग घरमा सबै सामग्रीहरू छैन, म सिधै रेडिमेड ब्रोथ खरीद गर्थें… तर यो नुस्खा एकदम साधारण सामग्रीहरूको साथ हो र श्रोभको स्वाद अचम्मैलाग्दो हुन्छ !! भयानक ... बानीबाट बाहिर मैले Avecr brn शोरबाको एक गोली थप्यो जुन आवश्यक नहुन सक्छ।
मलाई लाग्छ म यो ब्रोथ सबै बर्ष पिउनेछु।
सत्य यो हो कि यदि पिलर, जसले यस ब्रोथको स्वाद लिन्छ उसले खरीद गरेको एक लिने बारे दुई पटक सोच्छ। यो महान बाहिर आउँछ र गर्न को लागी धेरै सजिलो छ।
मेरो परिवार र मलाई यो मन पर्छ।
नमस्कार, हेम ह्यान्ड, तपाईको मतलब सेरानो ह्याम वा ताजा ह्याम हो?
क्याटरिना, सेरानो ह्यामको हड्डी हो। यसले तरकारी स्टू र ब्रोथहरूलाई उत्तम स्वाद दिन्छ। शुभकामना।
मारिया एन्टोनिया भन्यो
हेलो इलेना, के तपाईंले मासु राख्नु भएको मासुको कुल वजन gr०० जी.आर. भन्दा बढी हुँदैन भनेर मानिन्छ?
मारिया एन्टोनियालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते मारिया एन्टोनिया, यदि तपाईंले गोमांसको शोरबा बनाउनु भयो भने तपाईंले करीव gr०० जीआर थप्नु पर्छ। अभिवादन र म आशा गर्छु तपाईलाई यो मनपर्‍यो।
मैले हिजो बेलुकाको खानाको लागि यस सूप बनाईएको थियो, र परिणाम ग्रेट हो।
सधैं जस्तो, म चाउचाउ को राशि संग गलत थियो ... मैले gr ० जीआर थपें। र उनीहरूको कडाईका साथ सराहना गरियो, त्यसैले अर्को पटकको लागि, म १ 90० प्रयास गर्नेछु। (बच्चाहरूलाई यो बाक्लो लाग्छ)
व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद!
Chus लाई जवाफ दिनुहोस्
मेरा साना केटाकेटीहरूले यो अत्यन्त नराम्रो चीज ताराहरूसँग प्रेम गर्छन् र सत्य यो हो कि तपाईं भन्नुभए जस्तै उनीहरूलाई ऐना मन पर्छ।
नमस्कार मैले यस श्रोथलाई दुई-चार पटक बनाएको छु र यसको सामग्रीहरू यसमा रहेको छ। म यसलाई राख्न चाहन्छु यदि मसँग कद्दुको सानो टुक्रा छ किनभने यसले ठूलो स्वाद दिन्छ। हिजो मैले यो कुखुराको स्तनको एउटा टुक्रा र ह्यामको हड्डीले गरें। मासु फ्रिजमा छोड्दा मलाई दु: ख लागेको थियो, मैले केहि क्रोकेट्स बनाएँ र बेलुकाको खाना खाएको थियो, किनकि यद्यपि यो थोरै मात्र थियो, दुई छोरा र मेरो श्रीमान् र मेरो लागि यो पूर्ण थियो: सूप र क्रोकेट। मलाई पोष्ट मन पर्यो किनकि एक पटक मा तपाईं सबै डिनर बाहिर। तपाईको कामको लागि धन्यबाद।
एम। लुइसा भन्यो
म थर्मोमिक्समा नयाँ छु, र मैले तपाईंको प्याड पत्ता लगाएको छु र यो राम्रो देखिन्छ। हिजो मैले शोरबा बनाएँ र यो निकै राम्रो भयो र लगभग कुनै फोहोर नहुनुको कारण, केवल थर्मोमिक्स गिलास।
तपाईंको सहयोगका लागि धन्यबाद र म पक्कै तपाईंलाई पछ्याउने छु र धेरै कामहरू पनि गर्दछु।
एम लुइसलाई जवाफ दिनुहोस्
नुरिया रुइज भन्यो
नमस्ते केटीहरू, म पनि यस्तो नौसिखिए हुँ कि मेरो घरमा Thermomix केही दिनको लागि मात्र थियो र तपाईंसँग यति राम्रो प्रतिष्ठा छ किनकि मैले गरेको पहिलो कुरा भनेको तपाईंको ब्लग खोज्नु हो।
यो महान हो र म तपाइँ प्राय: भेट्न जान्छु। तपाईंको समर्पण को लागी धन्यवाद
नुरिया रुइजलाई जवाफ दिनुहोस्
नुरिया स्वागत छ !! म धेरै खुसी छु कि तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन पर्छ, अब काममा लाग्नुहोस् र स्वादिष्ट चीजहरू सुरु गर्नुहोस्। तपाईं यसको साथ खाना पकाउन मनपर्नेछ, तपाईं देख्नुहुनेछ। शुभकामना
मैले टीएम २१ लाई तीन बर्ष भन्दा बढी समयदेखि भोगेको छु, म यसबाट खुसी छु, र मैले 21 वटा पुस्तकहरूबाट धेरै पाक कलाहरू बनाएको छु जुन मैले हालसालै एउटा कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोग गरेको छु; मैले तपाईंलाई संयोगले पत्ता लगाएको छु, मसँग छैन। तपाइँको कुनै पनी व्यञ्जन अझै बनेको छ, तर ती सबै राम्रा देखिन्छन्। जब म केहि गर्छु भने म तपाईंलाई भन्नेछु, किनकि अब म तिमीलाई बधाई दिन्छु र म तपाइँलाई यस प्रकारको जारी राख्नको लागि प्रोत्साहित गर्दछु।
क्यान्डलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मैले आज यो विधि बनाइसकेको छु र मैले केही गल्ती गरेको छु भनेर मलाई थाहा छैन तर मैले यसलाई थर्मोमिक्समा समाप्त गर्न सकेको छैन, किनकि जहिले पनि मासुले ब्लेडमा काटिएको थियो, मेशिन रोकियो र भित्र अन्त मैले यो भाँडामा सिध्याउने निर्णय गरें। तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ कि ब्लेडहरू समात्न नपरोस, के तपाईंले हड्डीबिना मासु राख्नुहुन्छ? तपाईको पुस्तकपुस्तिका लागि धन्यबाद, यसले मलाई धेरै मद्दत गर्दछ। शुभकामना।
हुनसक्छ तपाईंले बायाँ मोड गर्नुभएन त्यसैले ब्लेडले मासुलाई नखोल्नुहोस् र यदि तपाईंसँग TM-21 मोडेल छ र तपाईंसँग बायाँ मोड छैन भने, ब्लेडमा बटरफ्लाइलाई गति १ मा राख्नुहोस्।
तरकारीहरू साना टुक्रामा राख्ने प्रयास गर्नुहोस् (तपाईं तिनीहरूलाई गति speed मा केहि सेकेन्डको लागि पनि काट्न सक्नुहुन्छ)।
हेरौं कि यो तपाइँको लागि उपयुक्त छ।
नमस्कार !! म तपाईंको पृष्ठको एक सशर्त प्रशंसक हुँ ... अब जब म बिदामा छु म हरेक दिन पकवानहरू हेर्छु र बनाउनको लागि धेरै पकवानहरू छान्छु। एक शंका; के म ब्रोमा बनेको बेलामा भोरोमा प्रयोग गर्न सक्छु? के म तापमान १०० बाट भोरोमा बढाउनु पर्छ? धेरै धेरै धन्यवाद !!!
नमस्ते राम्रो !!! म नयाँ हुँ र आज मैले शोरबाल गर्ने निर्णय गरेको छु। तथ्य यो हो कि अन्तमा यो ठूलो गन्ध आयो तर जब यो डिनरको समय थियो र मैले दुई कप तताए तर खट्टि थियो। कुनै सल्लाह ???
पेट्रीलाई जवाफ दिनुहोस्
आज हामीले भरिएका aubergines खायौं जुन मैले अन्य पटक गरेको छु र मेरो परिवारमा यस्तै। र अब म यो शोरबा बनाउँदैछु यसलाई फ्रीजरमा राख्न र नूडल सूप बनाउनको लागि आज राती मेरा बच्चाहरूले बेलुकाको खाना खाए।
मलाई तपाइँको व्यंजनहरु मनपर्दछ! साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।